Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Ny tantaram-piainan'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana;'Little Messi'. Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva tantaram-pitiavana bebe kokoa ny zava-misy momba ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny fahaiza-manao lalao nataon'i Bernardo Silva saingy vitsy no mihevitra ny fiainany ivelan'ny toerana izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Voalohandohan'ny fiainana
Bernardo Mota Veiga de Carvalho sy Silva dia teraka tamin'ny 10th of August, 1994 in Lisbon, Portugal ho an'i Mota Veiga Silva (ray) sy Maria João Silva (reny).
Tamin'ny zatovolahy dia nanohana an'i Benfica izy. Izy dia tovolahy mamirapiratra miaraka amin'ny IQ avo. Ny fihetsika sy ny asa mafy nataony dia ny fepetra ho an'ny toerana misy azy eo amin'ny tontolo football.
Nanomboka ny asany tamin'ny hazakazaka baolina izy tamin'ny faha-8 taonany ary nandroso tamin'ny alàlan'ny rafitra tanora talohan'ny nanombohany voalohany an'i Benfica B tamin'ny lalao faharoa amin'ny baolina kitra Portioge amin'ny 2013. Bernardo dia nomena anarana hoe 'Messizinho ' ary 'Little Messi' noho ny talentany goavambe.
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Jorge Mendes no Agent
Bernardo dia mpandraharaha manoloana an'i Jorge Paulo Agostinho Mendes maneran-tany. Anisan'ireo mpilalao baolina kitra be mpanaraka indrindra eran-tany i Mendes, miaraka amin'ireo mpanjifa Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, Marcos Rojo ary José Mourinho. Matetika izy no antsoina hoe "Super-mpandraharaha".
Nantsoina izy Mpitantana tsara indrindra amin'ny taona ao amin'ny Globe Soccer Awards enina mianadahy, avy amin'ny 2010 ka hatramin'ny 2015. Nanomboka mpilalao baolina kitra i Mendes saingy voatery nandao ny fanantenany amin'ny asa aman-draharahany izy rehefa nolavina tamin'ny klioba portio maromaro fony izy teo am-piandohan'ny 20. Raha ny tokony ho izy, dia nihazakazaka fivarotana horonan-tsary izy, niasa ho DJ ary nanokatra klioba sy clubclub tany Caminha, tanàna iray any avaratra andrefan'i Portogaly.
Maro no nino fa hanaraka an'i Manchester United ny mpilalao baolina raha niala tao Monaco izy, noho ny rohy misy ny 'super-agent' Jorge Mendes - izay manana mpitantana Jose Mourinho ho iray amin'ireo mpanjifany. Guardiola dia nandresy ny ady ho an'ny olona iray izay nampiaiky azy nandritra ny fahaverezan'ny 5-3 tao Monaco tamin'ny lalao voalohany tamin'ny fifandonana tamin'ny fifaninanana Champions League.
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Indray mandeha sisa
Nahazo zava-dehibe teo amin'ny kliobany i Jorge Jesus of Benfica. Hatramin'izao anefa dia mbola mitsikera ireo mpankafy ny klioba ny tsy fahampian'ny finoan'ireo talentan'ny homemilany, miaraka amin'i Bernardo Silva izay azo lazaina ho ohatra tsara indrindra.
Tsy nino na oviana na oviana ilay tovovavy tanora izy. Nandritra ny fotoana iray, i Jorge Jesosy dia namela an'i Bernardo hilalao minitra 31 amin'ny lalao telo ho an'ny ekipa voalohany an'i Benfica. Vao haingana i Bernardo Silva no niaiky fa teo ambany fahefan'i Jesosy 'Tsy manantena ny hanakorontana ny lohan'i Benfica', nilaza hoe: "Rehefa nampiofanin'i Jorge teo amoron-dalana tany Benfica i Jorge dia tsapako fa tsy nanana ho avy aho tao amin'ny klioba."
Benfica dia klioba Bernardo nankafy ny fony. Tena tiany ny fony fa manana ny teny filamatrany izy 'E Pluribus Unum' Teto ny tanany havia. Nofongohan'i Jorge Jesosy ny nofinofiny.
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Anarana mitovy, mitovy endrika tahaka ny mpilalao, namana tsara
Ny mpilalao baolina dia nahita ny fahatongavany tany an-tanàn-dehibe fa tsy izy irery no Silva teo amin'ny tarika. Samy lasa mpinamana izy ireo rehefa nahamarika fa nizara anarana sy toetra sy toetra mitovy aminy izy ireo. Izy roa dia manana tongotra havia voajanahary, maso ho an'ny pasipaoro, ambany foibem-pitondràna ary fahaiza-manao mahavariana izay niaro ny fiarovan-tenan'ny mpanohitra.
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Fahasamihafana sy fahaiza-misaina
Bernardo Silva mandany fotoana mandaingina amin'ny gorodona ary mihidy ora iray aorian'ny fampiofanana rehetra. Hanatsara ny fahaizanao misaina ary tompon'andraikitra amin'ny faharanitan-tsainy. Izany no mahatonga azy ho iray amin'ireo lalao baolina kanto indrindra manerantany. Ny faharanitan-dry zareo ihany koa dia hita ao amin'ny valinteny am-bavany sy lazainy amin'ny mpanao gazety.
Navoakan'i Bernardo Silva ny vondrona misy azy ao an-tanànany fa afaka mampifanaraka ny firenena, ny fiteny vaovao ary ny kolontsaina vaovao izy. Ampahany amin'ny fifindra-monin'ny baolina kitra izy. Ny fametrahana haingana tany Frantsa tamin'izany fotoana izany dia nanampy azy hivoatra amin'ny maha-olona azy.
Soa ihany fa nianatra teny anglisy izy talohan'ny nanonofy azy ho tonga tany Angletera. Bernardo dia mahira-tsaina ary ny toetrany matory rehefa avy nianatra dia nanome azy fahafahana hisaintsaina ny zavatra ilainy ary koa "Manaova zavamaniry rehefa mamirapiratra ny masoandro".
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Ligy 1 Player amin'ny taona 2016-2017 Season
Tokony ho i Silva, izay nanohitra an'i Edinson Cavani, izay naka ny lohatenin'ny Ligue 1 Player amin'ny taona, saingy raha nomena kintana maro be ny Monaco dia azo niparitaka ny vatony. Izany dia fanazavana avy amin'ny Goal.
Ny mpilalao rehetra manintona ao amin'ny morontsiraka atsimon'i Frantsa tamin'io vanim-potoana io anefa dia ny Portioge izay no mifanaraka indrindra amin'ny faharetan'ny fanentanana.
Ny vadin'i Fabinho mpiara-dia taloha dia nibaboka tamin'ny Febroary, 2017: "Izy angamba no mpikambana manan-danja indrindra ao amin'ny ekipa. Raha oharina amin'ireo mpihaza toa an'i Radamel Falcao sy Kylian Mbappe, mora foana ny fandraisany anjara. Raha ny marina, tsy mpilalao amin'ny tarehimarika mahavariana izy. Tahaka izany, tsy manome ny tadiny, ny fipoahana izy na ny herin'ny tian'i Benjamin Mendy na Tiemoue Bakayoko. Rehefa tonga tany Monaco tao amin'ny 2014 aho dia tsy fantatro fa handeha tahaka izao ity. Eny tokoa, tonga ho tsy fantatra tany Frantsa izy. Nieritreritra aho fa nanao sonia azy izy ireo raha vao nifanandrify tamin'ny ekipa senioran'ny Benfica. Ankehitriny dia lasa zavatra hafa izy.
Ny tantaram-pianakavian'i Bernardo Silva momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy voatanisa -Mahatalanjona mandrakizay any Jardim Izy
Niaiky i Bernardo Silva fa be dia be izy Leonardo Jardim izay toy ny ray ho azy kokoa noho ny mpanazatra teo aloha.
Ao amin'ny teniny... "Manokana ahy manokana i Jardim," Bernardo Silva nanamafy. "Miasa tsara amin'ny tanora mpilalao izy. Hitany fa tanora aho ary nanome ahy ny fahafaham-po. Tao an-tsaiko dia nahatsapa aho fa hafa. Nihatsara aho teo amin'ny 3 volana monja nanoloana ny klioba frantsay. "
Tena tia azy i Jadim ka nahatonga azy ho laharana nentim-paharazana 10 tao amin'ny klioba taorian'ny nanomezana azy ny laharana 15 shirt. Ny antony dia satria nankafiziny ny tongony mamy havia, ny hetsika ary ny fahaiza-manaony. Nataon'i Bernardo ny fisehoana 132 ho an'i Monaco, manampy ny klioba amin'ny ligy 1 amin'ny 2016 / 17.